डाक्टर केसीको पक्षमा नलाग्न शिक्षामन्त्रीलाई नेकपा सांसदहरुको दबाब ! | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार १० मंगलवार, ०७:३१
डाक्टर केसीको पक्षमा नलाग्न शिक्षामन्त्रीलाई नेकपा सांसदहरुको दबाब !
२०७५ पुष १८ गते प्रकाशित, l १६:१४
काठमाडौं, १८ पुस । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा नलाग्न दबाब दिएका छन् ।
सरकारले गरेको सहमित विपरितको विधेयक मान्य नहुने भन्दै केसी अनसन बस्न इलाम पुगेको भोलिपल्ट सत्ता पक्षका सांसदहरुले यस्तो दबाब मन्त्री पोखरेललाई दिएका छन् । मन्त्री पोखरेल भने सहमतिअनुसार नै विद्येयक ल्याउने पक्षमा छन् ।
त्यही कारणले बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसारकै विधेयक ल्याउने विषयमा सत्तापक्ष सांसदले नमानेपछि विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने विषयमा सहमति नजुटेको हो।
उता, कांग्रेसका सांसदहरुले भने डा केसीसँगको सहमति अनुसारकै विधेयक हुवहु आउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । छलफलमा सहमति नजुटेपछि उपसमितिलाई छिटो सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई छिटो भन्दा छिटो सहमतिमा ल्याएर टुंग्याउन निर्देशन दिएको हो। उपसमितिको बैठक शुक्रबार बस्ने छ।
डा केसीलाई तत्कालै अनसन सुरु नगर्न सांसदहरुले आग्रह गरेका छन्। सांसदहरुले सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै इलामबाट फिर्ता हुन पनि आग्रह गरेका छन्। केसीको पक्षमा नलाग्न र माग पूरा नगर्न शिक्षामन्त्रीलाई नेकपा सांसदको चेतावनी दिएका छन् ।
ऐनले चिकित्सा क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउँछः मन्त्री पोखरेल
युनेस्को सम्मेलनका लागि शिक्षामन्त्री चीनतर्फ